सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओ बाँडफाँट,सेयर पाउने भाग्यमानी कति ? - Arthasansar
विहीबार, ०६ कार्तिक २०७७ | Thursday, October 22, 2020 IPO Result
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आइपिओ बाँडफाँट,सेयर पाउने भाग्यमानी कति ?
शुक्रबार, ३० असोज २०७७, ०८ : ५९ मा प्रकाशित
अर्थ संसार, काठमाडौं- सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीले निष्काशन गरेको आइपिओ बुधबार बिक्री प्रबन्धक एनआइसी एसिया क्यपिटलको कार्यालयमा बाँडफाँट भएको छ ।
माग भन्दा भन्दा ७ गुणाबढी आवेदन परेकोले गोलाप्रथा माध्यमबाट आइपिओ बाँडफाँट गरिएको हो ।
जसमा २ लाख ७३ हजार जनाले १० कित्ताका दरले सेयर हात पारेका छन् । ५ लाख ९० हजार ५४५ जना आवेदनकर्ता भने आइपीओ हात पार्न बञ्चित भएका छन् । यसमा ८ लाख ६३ हजार ५६५ जनाले आवेदन दिएकामा ३ हजार ३६० जना आवेदकको आवेदन रद्ध भएको छ ।
कहाँबाट हेर्ने ?
आइपिओ बाँडफाँड भएपछि लगानीकर्ताले मेरो शेयरबाट सजिलै बिओआइडी नम्वर हालेर सजिलै हेर्न सक्नुहुनेछ ।
असोज २१ गते, बुधबारदेखि असोज २५ गतेसम्म निष्काशन भएको आइपिओमा ८ लाख ८८ हजार ७ सय ६ जना आवेदकले १ अर्ब ९० करोड ९१ लाख ८ हजार रुपैयाँ बराबरको १ करोड ९० लाख ९१ हजार ८० कित्ताको लागि आवेदन दिएका छन् । यो सर्वसाधारणका लागि माग गरिएको भन्दा ७ गुणा धेरै हो ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित दरमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको ३० लाख कित्ता साधारण शेयर (आइपिओ) निष्कासन तथा बिक्री खुल्ला गरेको हो । जसमध्ये १ लाख २० हजार कित्ता कम्पनीका कर्मचारीलाई, १ लाख ५० हजार कित्ता म्युचुअल फण्डहरूलाई र बाँकी २७ लाख ३० हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि निष्कासन गरेको हो ।
विदेशबाट शेयरबजारमा पनि कारोबार गर्न सकिन्छ। बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिदा ब्रोकरहरुलाई के आपत्ति ?
कुमारी बैंकले १४ प्रतिशत लाभांश दिने
अपि पावर कम्पनीको हकप्रद सेयरधनीको प्रतिक्षामा (हकप्रद सम्बन्धि सम्पूर्ण जानकारी )
नेपाल ल्युब आयलद्वारा १० प्रतिशत नगद लाभांश घोषणा
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ्गले बोलायो साधारणसभा, यस्ता छन् एजेण्डा
नबिल ब्यालेन्स फण्ड-२ र नबिल इक्विटी फण्डद्वारा लाभांश वितरण
छिमेक लघुवित्तको संस्थापक शेयर बिक्रीमा !
दोहोरो अंकले बढेको शेयर बजारमा एनआइसी एशिया बैंकको सर्वाधिक कारोबार !
यसकारण नेप्सेले सिटिजन्स बैंकसँग माग्यो ३ दिने स्पष्टिकरण !
सानिमा जनरलको आइपिओ ओपनिङ्ग रेञ्ज कति होला ?
८ अर्ब रुपैयाँको आइपिओ आउँदै
एनआईसी एशिया बैंकले गर्यो लाभांश घोषणा, कति ?
यी सात वर्गका मानिसले नि:शुल्क कोरोना उपचार पाउने !
नेप्सेमा १४ लाख कित्ता शेयर सूचिकृत !
मंगलबार सुन-चाँदीको बजारभाउ कति छ ? हेर्नुहोस्
तीन कम्पनीको एजिएम आज, कुनले कति लाभांश दिने ?